Kamarada ilaalinta ee Shabbat - Rabbi Michael Avraham
Kamarada ilaalinta Sabtida
Jawaabta > Qaybta: Halacha > Kamarada ilaalinta Sabtida
Pine Waxaa la weydiiyay 6 sano ka hor
Ma waxaad u malaynaysaa inay mamnuuc tahay in la hor mariyo kamarad daba socota taraafikada maalinta sabtida ah, ama la hor maro toosh ay shidayso taraafiggu, adiga oo u malaynaya in aan dani ugu jirin tooshka shidan ama kamarada shid.
mikyab Shaqaale Waxaa loogu jawaabay 6 sano ka hor
Inta aan ogahay ma jiro wax mamnuuc ah arrintan. Iyo qaar badan oo horeba wax uga qabtay (tusaale ahaan Shevet Halevi responsa iyo in ka badan). Tusaale ahaan halkan ka eeg:
Uurii'eel Waxay ku jawaabtay 6 sano ka hor
Su'aal la mid ah ..
Ka warran ku saabsan ka gudubka qalabka sheyga ee nidaamka alaarmiga marka nidaamku dansan yahay?
System off = bareeruhu wuu shaqeeyaa digniinna wuu siinayaa laakiin nidaamku ma dhawaaqi doono alaarmiga maadaama uu ku jiro qaabka heeganka. Dareemuhu waa wireless-ka wuxuuna gudbin karaa oo keliya iyada oo aan suurtagal ahayn in wax lagu soo geliyo, markaa laguma dami karo nidaamka ee waa in la saaro batteriga oo keliya.
Michi Shaqaale	Waxay ku jawaabtay 6 sano ka hor
Waa maxay farqiga u dhexeeya? la mid ah sida kor ku xusan.
Uurii'eel Waxay ku jawaabtay 5 sano ka hor
Kaliya su'aasha soo koob.
Tani waxay ka dhigan tahay in qalabka wax baaraha uu shaqeeyo oo gudbiyo mar kasta oo aad ka gudubto, laakiin nidaamka alaarmiga kama jawaabo gudbiyaha.
Waa qalabka wax qabad ee lagu rakibay gurigayga, aniguna mabda'ayan waan awoodaa ka hor inta aan sabti kasta daboolin qalabka wax baadha / ka saarida batteriga.
Farqiga kaliya ayaa ah in aan haysto ikhtiyaarka aan ku xallinayo dhibaatada. Su'aashu waxay tahay dhibkan ma loo baahan yahay.
Michi Shaqaale	Waxay ku jawaabtay 5 sano ka hor
Haddi uu baaraha tooso balse aanu gudbin waxba ma arko sabab aan uga walwalo. Fikradayda ma jirto wax mamnuuc ah arrintan. Rabbi Rabinowitz waxa uu dib u cusboonaysiiyay in marka aanad arkin natiijooyin toos ah oo ficil ah aanay mamnuuc ahayn (kadhka ka furaya albaabka hudheelka ee Shabbat), taasina waa marka ay jiraan natiijooyin (albaabku wuu furmayaa) laakiin ma arkin cawaaqibka wareejinta. kaarka. Tani waa arrin ugub ah oo aanan hubin in aan ku raacsanahay. Laakiin halkan ma jiraan wax natiijooyin ah oo dhan (oo kaliya ma arkin iyaga) sidaas darteed ma arko baahi loo qabo in la sii kordhiyo.
Muuse Waxay ku jawaabtay 5 sano ka hor
Waxay ila tahay inaad shido qalabka baaraha maalmaha aanad guriga joogin. Sida cad maya?